Kofi Annan oo maanta geeriyooday – Radio Muqdisho
Kofi Annan oo maanta geeriyooday
Kofi Annan, oo ahaa xoghayihii hore ee Qaramada Midoobay ayaa maanta geeriyooday isagoo da’diisu aheyd 80 sano jir.
Mr Annan ayaa ku geeriyooday magaalada Bern ee dalka Switzerland, waxaana uu ahaa xoghayaha guud ee QM intii u dhaxeysay 1997-2006, waxaa uu sidoo kale ku guuleystay biladda nabadda ee loo yaqaano Nobel Peace Prize.
Intii ka dambeysay waxaa uu noqday ergeyga QM u qaabilsan arrimaha Suuriya. Isagoo ahaa xoghayihii guud ee 7 aad ee Qaramada Midoobay yeelato.
Shirka Wadatashiga diyaarinta hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta oo ka furmay Muqdisho+Sawirro